Waxay tiri “Cudurka dibirada wuxuu iga dhigay sida in aan uur leeyahay Markasta” | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — May 20, 2020
“Waxaan u ekahay dadkuna ii arkaan sida qof uur leh markasta. In xanuunkan uu igu dhacdo wuxuu iga dhigay sida qof kale.” Natasha King kama hadleyso arrin la xiriirta cayil xad dhaaf ah, ee waxay ka hadleysaa in ay qabto cudur sababa in hanaanka difaaca jirka uusan u shaqeyn sidii loo baahnaa kaas oo lagu magacaabo coeliac.
“Wuxuu cudurkan igu dhacay anigoo 18 sano jir ah mana ka war haynin inaan qabo,” ayey tiri gabadha oo hadda 21 sano jir ah oo la hadashay BBC Radio 1 Newsbeat.
Cudurka Coeliac waa xaalad ka dhalata falcelin ay sameeyaan qaar ka mid ah borotiinnada, badanaana wuxuu saameeyaa caloosha. Wuxuu sababi karaa dibiro, shuban iyo in qofka uu waxba cuni waayo. Sida ay sheegeen dhakhaatiirta xanuunkan daweysa, cudurka waa mid badan oo jira, wuxuuna ku dhacaa hal qof oo ka mid ah boqolkii qofba.
Keliya, boqolkiiba 30% ee xaaladaas qaba ayey caloosha waynaataa – Dhaqaatiirtana waxay sheegayaan in ay jiraan malaayiin qof oo qaba xanuunka haddana aan iska warhayn.
‘Waa dagaal joogto ah’
Natasha waa macalim Dugsi Sare, balse markasta ma awoodo in ay sameyso dhaqdhaqaayada jimicsi ee iskuulka. “Markasta waxaa i xanuuneysa caloosha waana iska dibirsanahay. Markii hore maba ogeyn in calool weyn aan yeelan doono, xilligii aan iska ciyaari jiray oo aan ka war hayn in jirkeyga sidan uu noqonayo,” ayey tiri.
“Waxay ahayd dhibaato badan. Mar kasta waan iska jiifay, xilli aan wanaagsanayn ayaan hurdi jiray, anigoo tabar daro dareemaya. Waxaan ahaa sida reer aakhiraad.” Mararka qaar waxaa bara wejiga iyo gacmaha sababtoo ah xanuunka wuxuu saameeyay qanjiradeeda ee caloosha iyo jirka.
“Waxay ahayd xaalad taagan uun, waxana ku fakaray ‘maxaa aniga iga qaldan?'”
‘Muddo ayey qaadatay in xanuunka aan si rasmi ah isugu arko’
Natasha dhowr goor ayey astaamahaas isku aragtay markii ay todobo sano jirka ahayd, waxaana loo geeyay dhaqtar. Markii hore waxaa loo sheegay in ay qabto xanuun caloosha ku dhaco ee IBS, waxaana la siiyay kaniiniyo. “Balse xaaladda waxay isbedeshay markii aan dhakhtarka u tagnay.”
“Muddo ayey qaadatay balse ugu dambeyn baaritaan caafimaad oo rasmi ah ayaa la igu sameeyay, waxaana la ogaaday inaan qabo coeliac.” Ka dib waxaa lagu sameeyay “baaritaan dhib badan” oo ah mashiinta endoscopy – taas oo ah hannaan kaamera lagu gelinayo caloosha oo mareysa dhuunta – si xanuunka loo arko. Dr Peter Gillett – oo ah dhaqtar qaabilsan xanuunkan – wuxuu sheegay in IBS iyo cudurka Coeliac ay maraka qaar leeyihiin calaamado isku mid ah oo sababi kara jahwareer.
“Iyadoo taa ay jirto, haddana way fududahay in qofka uu sugo uuna la socdo xaaladda. Waxaa suuragal ah in loo sheego in ay qabaan IBS aysanna sameyn baaritaan.” Taasi waa sababta dad badan ay sannado badan dib ugu dhacdo mudadii laga daweyn lahaa, ayuu hadalka ku sii daray.
Laakiin, uma baahnid in aad isku aragto calaamadaha xanuunka Coeliac. Tusaale, Josh Malan, wuxuu ka mid yahay dadka nasiibka leh ee uu cudurka ku dhacay in kastoo si weyn uu ugu nuglaa. Wuxuu qabay cudurka Macaanka noociisa koobaad, wuxuuna si joogto ah ugu baahnaa baaritaan iyo daweyn. Markii uu 10 sano jirka ahaa, dhaqtarkiisa ayaa ka shakiyay ka dibna waa laga baaray xanuunkan caloosha saameeya.
Ninkan oo hadda 20 sano jir ah wuxuu sheegay in dhibaato badan uu kala kulmay xanuunka “sababtoo ah dunida waxaa ka buuxa cuntooyiinka leh maadada gluten” ee cudurka sababta. Josh waa darewal ka qeyb gala tartamada gawaarida – taas oo dhibaatadeeda gaarka ah leh.
“Inaad kexeyso gawaari kala duwan ee daafaha caalamka, waxaa markasta dhib kala kulmaa inaan helo nooca cuntada ee aan u baahanahay,” ayuu yiri. “Meelaha qaar maba ka war hayaan in cunto aysan ku jirin gluten la sameeyo.”
‘Hadda waan dhalaalayaa’
Labaduba, Natasha iyo Josh waxay ogaadeen in xaaladdooda ay isbedeshay markii ay billaabeen in ay cunaan raashiin aan lahayn maadada gluten. Gluten – waa maado ku jirta dalagga qaar ee beeraha sida sarreenta ama qamadiga. Laba nooc oo borotiin ah oo laga helo gluten waxay sababaan xanuunka coeliac.
“Waxay ahayd arrin aad u fiican, xitaa jirkeyga wuu dhalaalay, caloosheyda way yaraatay, dibiradii iyo dareenkii kale oo dhan way iga tageen,” ayey tiri Natasha. In kastoo Josh uusan isku arki isbedel wayn haddana wuxuu dareemayaa inuu caafimaaday.
“Waxaa dareemayaa awood iyo firfircooni badan, musqushana aad uma aado hadda. Waxaan xusuustaa hooyadey oo igu dheheysa – ‘hadda si aad ah ayaad u fiicnaatay’.”
Tags: Cudurrada Caloosha: "Cudurka dibirada wuxuu iga dhigay sida in aan uur leeyahay Markasta"
Next post Mar Dhoof iyo Soonkii Qoraxdii Dhici Weyday
Previous post Wareysigii Ra’iisal Wasaare Meles Zenawi – BBC 2008